RAM CHARAN (၈) ခုကြေငြာခဲ့သော HINDI HINDI - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Ram Charan ၏ (၈) ကူးယူထားသောဟိန္ဒူများစာရင်း။
salman khan မိသားစုပုံများနှင့်အတူ
Ram Charan Tollywood ရှိလခအမြင့်မားဆုံးရရှိသောသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၊ စီးပွားရေးသမားနှင့်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ Ram Charan သည်သူ၏ဘောလီးဝုဒ်တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူပွဲထွက်ခဲ့သည် Zanjeer အရာအတွက် (2013) Priyanka chopra အမျိုးသမီးခဲကစားခဲ့သည်။ Charan သည်သီချင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွင့်သည့်အဆိုတော်အဖြစ်လည်းပြသခဲ့သည် မွန်ဘိုင်းကေသူရဲကောင်း ။ သူသည်အောင်မြင်သောတောင်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ Ram Charan ရုပ်ရှင်ဟုခေါ်သည့်ဟိန္ဒူဘာသာ၏စာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
၁ ။ Bruce Lee - သူရဲကောင်း ဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ် ‘အဖြစ်သတ်မှတ်သည် Bruce Lee - သူရဲကောင်း
Bruce Lee - The Fighter (၂၀၁၅) သည် Sreenu Vaitla မှရိုက်ကူးထားသောအိန္ဒိယတီလီဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်သောဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် Ram Charan နှင့် Rakul Preet Singh က ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ဤရုပ်ရှင်သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်နာမည်တူသောအမည်ဖြင့်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်အမည်ပေးထားသည် '' Bruce Lee - သူရဲကောင်း ။
ကြံစည်မှု - ကာတီသည်သူ၏အစ်မအတွက်သင်ကြားမှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ လျှို့ဝှက်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ကိုမှားယွင်းစွာမှတ်မိလေ့ရှိသည့် Kartik သည်စီးပွားရေးသမား Deepak Raj နှင့် Jayaraj တို့၏မကောင်းသောအကြံအစည်များကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။
2. 'Magadheera' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာတွင်အမည်တပ်ထားသော 'Magadheera'
မာဂဒီးယား (2009) သည်အက်စ်အက်စ်။ ရာဂျမီအုလီမှရိုက်ကူးသောအိန္ဒိယတီလီကန်ဘာသာစကားဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Ram Charan နဲ့သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် Kajal Aggarwal Dev Gill နှင့် Srihari တို့သည်ထင်ရှားသောအခန်းကဏ္appearတွင်ပါ ၀ င်နေစဉ်။ ၎င်းသည်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည် 'Magadheera' ။
ကြံစည်မှု - Harsha သည် Indu ၏ဖခင်အားသတ်ဖြတ်မှုအတွက်မဟုတ်မမှန်ပါဝင်ပတ်သက်သူဖြစ်ပြီးပြန်ပေးဆွဲခံရသည်။ သို့သော် Harsha နှင့် Indu တို့သည်ယခင်ဘဝမှနှောင်ကြိုးကိုမျှဝေခံစားကြပြီး၎င်းကိုသဘောပေါက်သောအခါသူသည်အရာရာကိုပြင်ဆင်ရန်စတင်ခဲ့သည်။
၃ ' Yevadu 'ဟိန္ဒီဘာသာဖြင့်' Yevadu 'ဟုအမည်တပ်
ယူဗဒူ (2014) သည် Vamsi Paidipally မှပူးတွဲရေးသားကာဒါရိုက်တာအိန္ဒိယတီထွင်သည့်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ Ram Charan ပါ ၀ င်ပါတယ်။ Shruti Haasan နှင့် မေီဂျက်ဆင် ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္များတွင်နေစဉ် Allu Arjun , Kajal Aggarwal, Sai Kumar, Jayasudha နှင့် Rahul Dev ထောက်ပံ့ရေးအခန်းကဏ္။ ၎င်းသည်အလွန်ထူးကဲသောရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်နာမည်တူတူအမည်ပေးခဲ့သည် 'အီဗတ်ဒူ' ။
karan yeh ရစ်ချက် kya kehlata hai
ကြံစည်မှု - မီးလောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဒဏ်ရာများကိုခံစားပြီးနောက် Satya သည်ခြားနားသောမျက်နှာတစ်ခုပေးသည်။ ဆေးရုံမှဆင်းပြီးနောက်သူချစ်သော Deepti ၏လူသတ်မှုနှင့်ဆက်ဆံသည်။ သို့သော်သူ၏မျက်နှာအသစ်ကသူ့ကိုရန်သူအသစ်များပေးခဲ့သည်။
၄ ' Govindudu Andarivadele ' 'Yevadu 2' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်
Govindudu Andarivadele (၂၀၁၄) သည်အိန္ဒိယတီဂူဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်သောဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်ရှင်တွင် Ram Charan၊ Srikanth၊ Kajal Aggarwal နှင့် Kamalinee Mukherjee တို့ကိုအဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ Prakash Raj Rahman နှင့် Adarsh ​​Balakrishna တို့သည်ပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒါဟာပျမ်းမျှ box-office မှာဖျော်ဖြေနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုခေါ်ဝေါ် 'Yevadu 2' ။
ကြံစည်မှု - ရွာအကြီးအကဲ Balaraju သည်သူ၏သားတစ် ဦး ဖြစ်သော Chandrasekhar ကိုဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်စေရန်ကူညီသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Chandrasekhar ကသူ့အားနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အခြေချရန်သူ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းကြားသောအခါ Balaraju စိတ်ဆိုးသွားသည်။
၅ ' Naayak 'ကို Double Attack' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
နယက (၂၀၁၃) မှာ V. V. Vinayak မှရိုက်ကူးထားသောအိန္ဒိယတီဂူဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားသောမာလာလာရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ Ram Charan၊ Amala Paul ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်လည်းအမည်တပ်ခဲ့သည် 'နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှု' ။
ကြံစည်မှု - ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ Cherry သည်လူသတ်မှုအတွက်အဖမ်းခံရတော့မည်၊ ရုတ်တရက်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည့်အစစ်အမှန်လူသတ်သမားနှင့်ချယ်ရီ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဖမ်းမိသောအခါလူသတ်မှုအတွက်အဖမ်းခံရတော့မည်။ ချယ်ရီကသူ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါသူကကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
၆။ 'ရာချ' ကိုဟိန္ဒူဘာသာစကားဖြင့် 'လောင်းခြင်း Raja' ဟုခေါ်သည်။
Streak (၂၀၁၂) သည် Sampath Nandi မှရိုက်ကူးသောအိန္ဒိယတီလီဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်သောရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ Mukesh Rishi၊ Dev Gill နှင့် Kota Srinivasa Rao တို့ကအဓိကရန်သူနေရာတွင် Ram Charan နှင့် Tamannaah ကို ဦး ဆောင်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုအလွန် hit နှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူသို့အမည်တပ်ထားသောခဲ့သည် 'Betting King' ။
ကြံစည်မှု - Raj သည်မလုံခြုံသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလောင်းကစားခြင်းဖြင့်ငွေရှာသည်။ သူ့ဖခင်ကိုကုသရန်ငွေအလွန်လိုအပ်နေချိန်တွင်သူသည် Chaitra ကိုငွေအမြောက်အမြားဖြင့်လောင်းကစားရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ထိုအခါမူကားသူသည်တုန်လှုပ်စေသောအချက်ကိုသိရှိသွားသည်။
7. 'Chirutha' ကိုဟိန်ဒီဘာသာတွင် 'Chirutha'
ကုရ်အာန် (2007) Puri Jagannadh ဒါရိုက်တာအိန္ဒိယတီဘီဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Ram Charan ၏ပထမဆုံးပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်သည် Neha Sharma က Ashish Vidyarthi၊ Prakash Raj နှင့် Brahmanandam တို့သည်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်နာမည်ကြီးပြီးဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်နာမည်တူစွာရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည် 'ခရူတ' ။
ကြံစည်မှု - ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းက Charan သူ့ဖခင်ရှေ့ကအသတ်ခံရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူ့အမေကိုကယ်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံစုဆောင်းဖို့အတွက်လည်းသူထောင်ထဲကိုထွက်သွားတယ်။ ၁၂ နှစ်ကြာပြီးနောက်သူသည်ဘန်ကောက်သို့ရောက်ရှိပြီးရန်သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၈ ။ 'Dhruva' ဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ် ‘အဖြစ်သတ်မှတ်သည် Dhruva '
Dhruva (2016) သည်အိန္ဒိယဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုသောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်သည်Surender Reddy ကရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကား။ ၎င်းတွင် Arvind Swamy၊ Rakul Preet Singh နှင့် Ram Charan ပါရှိသည် Navdeep အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ in များတွင်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာထူးကဲကောင်းမွန်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာနဲ့နာမည်တူတူအမည်ပေးထားသည် '' Dhruva ' ။
ကြံစည်မှု - IPS အရာရှိ Dhruva သည် Siddarth Abhimanyu ဟုခေါ်သောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသိပ္ပံပညာရှင်ဖွင့်လှစ်သောလူကုန်ကူးမှုလက်စွပ်ကိုတွေ့ရှိသောအခါသူသည်သူ့ကိုဖျက်ဆီးရန်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သည်။
ranveer Singh အမြင့်
Michael Jackson ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ
Mukesh ambani အိမ်နှင့်ကားများ
မင်းသား Ramya krishnan မိသားစုဓာတ်ပုံများ
devoleena bhattacharjee မွေးနေ့